Home News MW Farmaajo oo la kulmay Xildh. Beesha Daarood: “Kursigii beesha Daarood waxa...
MW Farmaajo oo la kulmay Xildh. Beesha Daarood: “Kursigii beesha Daarood waxa uu qarka u saaran yahay in uu lumo”
MW Farmaajo ayaa xalay waxa uu laqaatay kulan qaasa qaar ka mida Xildhibaanada Beesha Daarood oo ka tirsan Golaha Shacabka. Kulankaan aya waxa uu dabasocday mooshin xoowlli ku socda oo ay wadaan xildhibaanada ka tirsan labada Aqal.
Kulankii xalay oo looga yeeray xildihibaanadda uu rumeysan yahay in ay taageersan yihiin isaga laakiin qaar badan oo ka mida ay wax ka siixiixay Mooshinka isaga ka dhanka ah. Farmaajo aya waxa uu ku ooyay xildhibaada Daarood isaga oo u sheegay in hadii mooshin isaga laga keeno ay beesha Daarood kurisga weyn doonto.
Mid ka mida Xildhibaanada uu xalay la kulmay Farmaajo ayaa yiri isaga oo qoslaya “oo ma hada ayaa Daarood kursi heysataa?, kursigisii iyo sharaftiisaba asaga ayaa ceel ku riday” waxa uu intaas raaciyay “ waxa sharafta Daarood ku jirtay in kurisaga uu Farmaajo ku fadhiyo in qabaa’ililada kale la siiyo oo aan shafteena ilaashano”.
Farmaajo oo noqday MW ugu liitay ee Soomaaliya soo mara. Waxaana uu meel uga dhacay beesha uu ka soo jeedo oo ay adkaan doonto in mar kale Soomaali ku aaminto mas’uuliyad hogaamineed.
Previous articleDhageyso; C/qaadir Shariif Sheequnaa Maye Oo Sheegay In Uusan Isaga Magacaabin Gudiga Doorashada Koonfur Galbeed
Next articleMaxay tahay ujeedka ay u yimaadeen Muqdisho Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Itoobiyo & Eriteriya
Madaxweyne Saciid Deni maxaa laga filan karaa!!
Wefdi heer caamlai ah oo ku wajahan Magaalada Kismaayo